Mee ọchọpụta ihe anwansị na Google Chrome | Akụkọ akụrụngwa
Otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwere ike ịnwe na ihe nchọgharị Internetntanetị, dị dibịa afa, nke kachasị dabere na akwụkwọ ọkọwa okwu anyị gbakwunyere na ya. Ma Mozilla Firefox na Google Chrome enwere ike ịchọta ihe ndị a n'ụzọ dị mfe site na nwa afọ ọrụ ma ọ bụ site na mgbakwunye ndị agbakwunyere na anyị ga-agbakwunye na ihe nchọgharị ahụ.
Mgbe ịchọrọ ịtinye akwụkwọ ọkọwa okwu na ihe nchọgharị Firefox, a ga-enweta ya site na ebe nchekwa Mozilla, enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu ịhọrọ na n'asụsụ niile enwere ike (yana ụdị iche iche ha na nke ọ bụla n'ime ha). Ọnọdụ yiri nke a ka Google Chrome chọrọ, ọ bụ ezie na ebe a anyị nwere ikeAnyị nwere ike nweta akwụkwọ ọkọwa okwu n'ụzọ dị mfe ma dịkwa ụzo, nke Firefox na-atụ aro anyị, nke ga-abụ ihe kpatara edemede a.
1 Chọọ akwụkwọ ọkọwa okwu ọhụrụ maka Google Chrome na Firefox
2 Methodzọ mbụ iji tinye akwụkwọ ọkọwa okwu na Google Chrome
3 Secondzọ nke abụọ iji tinye akwụkwọ ọkọwa okwu na Google Chrome
Chọọ akwụkwọ ọkọwa okwu ọhụrụ maka Google Chrome na Firefox
Ka ị ghara ịhapụ oghere na isiokwu anyị ga-aza n'okpuru, na nke mbụ anyị ga-ekwu ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ịchọrọ tinye amaokwu ohuru na ihe nchọgharị Firefox, o nweghi ihe o mere ị nweela ụdị ya kachasị ọhụrụ,, ebe ndọtị dakọtara na ha niile ebe ọ na-esite na otu Mozilla repository:
Mepee ihe nchọgharị Mozilla Firefox gị.
Isi kwupụta njikọ na-esonụ.
Site na windo ohuru nke ị nọ ugbu a, ị ga-agagharị na asụsụ ọ bụla dị n'ebe ahụ, na-enwe họrọ nke ịchọrọ ịwụnye ma rụọ ọrụ na Firefox. Mgbe ịmalitegharịrị ihe nchọgharị ahụ, ị ​​ga-enwe ike iji nyocha ya anwansị, na-arụ ọrụ ya na mbụ site na nhọrọ izugbe n'ime nhazi ya.
Dị ka anyị hụworo, iji tinye akwụkwọ ọkọwa okwu ọhụrụ yana ya, na onye nyocha okwu n'ịntanetị na Mozilla Firefox anyị chọrọ usoro ole na ole iji rụọ, nke gụnyere ịmepe taabụ ole na ole ma rụọ ọrụ ole na ole.
Methodzọ mbụ iji tinye akwụkwọ ọkọwa okwu na Google Chrome
N'oge a, anyị ga-egosi usoro kachasị dị mkpụmkpụ ka ị nwee ike itinye akwụkwọ ọkọwa okwu ọhụrụ, mana na ihe nchọgharị Google Chrome:
Mepee ihe nchọgharị Google Chrome.
Pịa njikọ na-esonụ.
Na nke a ugbu a ị ga-enwe windo izugbe site na ebe ị nwere ike ịmalite jikwaa akwụkwọ ọkọwa okwu ọhụrụ ịchọrọ inwe na ihe nchọgharị ahụ. Ugbu a, ebe ọ bụ na ọ dị mma mgbe niile ịmara ebe ụfọdụ njikọ sitere (dịka nke anyị kwubiri na mbụ), n'okpuru anyị ga-ekwupụta usoro ị ga - eso mana nwere ntọala ka mma.
Secondzọ nke abụọ iji tinye akwụkwọ ọkọwa okwu na Google Chrome
Window nke anyị ga-abata ga-abụ otu ihe ahụ anyị tụrụ aro na mbụ, ọ bụ ezie na ugbu a, anyị ga-atụ aro usoro ebe akọwapụtara ya site na nzọụkwụ, ụzọ iji ruo ya na-enweghị ịpị njikọ njikọ nke ikekwe, maka ọtụtụ, amaghi:
Gbaa Google Chrome.
Pịa na akara atọ (akara hamburger) n'akụkụ aka nri elu.
Ugbu a, anyị ga-aga Nhazi.
Anyị na-aga na ala nke na peeji nke na pịa njikọ «Gosi Advanced Nhọrọ".
Anyị na ụgbọ mmiri na mpaghara ebe «Asụsụ".
Anyị na-pịa nhọrọ na-ekwu, «Ntọala Ntinye Asụsụ na Ederede".
Na nhọrọ ndị a anyị ga-ahụ onwe anyị na windo ahụ anyị nọrọ na mbụ; Ebumnuche nke imezu usoro abụọ a bụ ka onye ọrụ Google Chrome mara otu esi aga mpaghara ahụ ma ọ bụrụ na ọ chetaghị njikọ ahụ anyị tụpụtara na akụkụ mbụ nke usoro ahụ.
Na windo ahụ ga-emeghe ma na onye na-agụ ya ga na-ele anya, ị nwere ike ịmasị naanị asụsụ abụọ ejirila "ndabara" na ndabara, ndị a bụ Spanish na Bekee; naanị na anyị ga-pịa bọtịnụ na ala na-ekwu «Tinye»Imepe windo ohuru.
N'ime ya a na-enye anyị ohere ịhọrọ asụsụ ọ bụla anyị chọrọ itinye na akwụkwọ ọkọwa okwu anyị na ihe nchọgharị ahụ.
Gịnị bụ ojiji nke ọkọwa okwu nke m webatara na Google Chrome maka? Anyị ebu ụzọ kọwaa ihe ndezi ederede dị n'ịntanetị na-akpali mmasị iji na ikpo okwu ọ bụla; Ọ bụrụ na anyị ejiri ya rụọ ọrụ na Google Chrome ma ọ bụ na ihe nchọgharị ọ bụla nwere akwụkwọ ọkọwa okwu arụ ọrụ, naanị ihe anyị ga-akọwa bụ akara nyocha anyị chọrọ ịme ka mkpụrụ okwu edere na-ezighi ezi nwere obere akara na-egosi mgbazi.
N'ebe ahụ, anyị ga-eji bọtịnụ ziri ezi pịa ma hụ nkọwa okwu ziri ezi nke ihe nchọgharị ahụ na-enye anyị na mgbakwunye a nke anyị arụnyela ma rụọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi tinye akwụkwọ ọkọwa okwu na Google Chrome
Ebee ka m dọwara ụgbọala m? Echegbula, Google Ugbu a -echeta ebe nchekwa gị